Fitsipika ho an'ny Mampiaraka Rehefa Te Fifandraisana Matotra HuffPost
Fitsipika ho an’ny Mampiaraka Rehefa Te Fifandraisana Matotra HuffPost
amin’ny Sonya Rhodes, PhD sy i Susan Schneider, coauthors»Ilay Alpha Vehivavy Mihaona Ny Lalao: ny Fomba Mafy ny Vehivavy dia Afaka Mahita ny Fitiavana sy ny Fifaliana rehefa Tsy misy ny Fandaminana.»Amin’ny lafiny sasany, ny fiarahana amin’ny aterineto sy ny haino aman-jery sosialy efa rava tanteraka ny milalao eny an-tsaha: ny Vehivavy dia afaka mandray anjara-raharaha momba ny fiarahana sy ny firaisana ara-nofo ny fiainantsika amin’ny fomba iray akory aza izy ireo teo aloha. Afaka manomboka ny daty na ny vondrona hangouts ho toy ny mora toy ny lehilahy. Ny fiarahana amin’ny tontolo manodidina manao ny tsara mavitrika safidy ary izany dia midika fa raha vonona ianao fa ny monogamous fifandraisana, tsy maintsy mazava tsara momba ny tanjona, na ny tenanao sy izay mety ho mpiara-miombon’antoka. Ny fitadiavana mpiara-miasa amin’ny tetikasa, ary mitaky fotoana sy hery. Raha izay tianao dia ny fifandraisana maharitra, manatona azy miaraka amin’ny tanjona ao an-tsaina. Ny fisainana dia manan-danja: Manomboka avy amin’ny satria fantatrareo fa ianareo dia eo amin’ny fanaraha-maso ny dingana. Raha tadiavinao online, manao ny mombamomba amin’ny namana ity dia hanampy anao hanamaivana. Aza mirehareha na ho tena deprecating. Ho mampihomehy, fohy sy fohy, ary tsy feo loatra cutesy. Sary iray izay mampiseho anao navitrika tamin’ny fanohizana ny mahaliana dia tsara izany satria manome vaovao tsy ho wordy. Notarafina ny mombamomba fifantenana. Haka avy telo na efatra ry zalahy sy ny famantarana ny liana. Rehefa hifandray ny olona, dia mankanesa ao amin’ny fanamarihana iray izy dia natao tao amin’ny mombamomba azy. Raha misy olona mampiseho ny liana eo amin’ny mombamomba azy ireo, tsarovy fa ianao no tsy voatery hamaly raha tsy te. Aoka ianao ho mpitsara. Maro ny fanantenana, manomboka amin’ny mailaka nifanakalozany. Fa mametra ny mailaka tsy nisy mihoatra ny roa na telo alohan’ny milaza ny mifanatri-tava fivoriana. Na iza na iza te-ho maro emailing, dia tsy liana amin’ny fifandraisana. Izy dia tiany ny anarana mailaka ny filalaovana fitia. Tsy io olona io dia mety ho manambady, ao amin’ny fifandraisana hafa, na ny vao mandady. Handamina ny kafe na misotro amin’ny toerana mety. Miresaka momba ny zavatra tianao hatao, ny asa, ny oniversite tantara, na zavatra niainana vao haingana. (Ho amin’ny fotoana mampiseho ny dia, fara fahakeliny, dimam-polo ny fahombiazana.). Tandremo tsara sao misy mandanjalanja tsara eo amin’ny resaka.
Moa ve ianao. Ve ianao mahita tombontsoa iombonana? Tsy miresaka momba ny na ny olana. Tsy manome torohevitra na dia izy no mangataka azy io, dia ratsy ny fomba hanombohana. Hijanona upbeat. Amin’ny daty voalohany, ataovy azo antoka fa manana drafitra hafa rehefa afaka izany sy mitandrina azy ireo, na inona na inona ny zava-mitranga. Raha toa ianao underwhelmed izany olona iray, dia hanana ny tsara afa-mandositra ny lalana. Raha toa ianao ka manana fotoana lehibe, ary tsy te-handao, aza ovaovana ny drafitra teo aloha. Raha toa ianao ka liana, milaza izany mazava tamin namela. (Mety ho toa izany koa mandroso, fa tsy misy zavatra diso momba ny maha-mazava.). Manolotra ho raraka ny maso. Amin’izao fotoana izao, ny tokan-tena, ny oniversite-ny vehivavy nandia fianarana dia latsaky ny telo-polo matetika ny fanaovana vola bebe kokoa noho ny lehilahy, ka tsy hitsangana amin’ny lanonam-niandry azy mba handoavana. Miandry mba hijery raha toa izy no hanombohany ny mailaka na ny soratra. Raha tsy, ny hazo fijaliana azy eny ny lisitra. Izy tsy liana na misy.
Raha toa ka ny mailaka na ny andinin-teny (na dia mahatonga ny ezaka fanampiny mba hanao antso an-tariby.), mamaly, fa ny hetsika miaraka sy ny soso-kevitra fivoriana indray. Izany dia tokony ho ny tena daty raikitra ny fotoana sy ny toerana. Raha te hiaro izany tampoka, amin’ny zavatra tahaka ny hoe»Aoka ny hanandrana ny talata,»tsy hanelingelina ny fametrahana izany eo amin’ny kalandrie. Izany fotsiny dia tsy mety hitranga. Taorian’ny efa nihaona, tandremo ny andinin-teny izay tonga tao hafahafa fotoana sy namana fa unaccompanied amin’ny alalan’ny soso-kevitra ny daty. Ireo no diso zavatra tsara izy ireo satria milaza bebe kokoa ny fifandraisana akaiky noho ny tena. Tsy ho raisina amin’ny. Azo inoana fa, dia leo sy fotsiny, milalao amin’ny finday. Mamaly afa-tsy raha toa ianao efa nahita azy amin’ny olona ao anatin’ny herinandro lasa teo. Teny farany: Raha toa ka manomboka mahita olona iray somary tsy tapaka (farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro), fa izay ianao ihany no manomboka ny fifandraisana. Mandeha tsikelikely. Hahafantatra azy. Jereo raha izy no tsy miovaova, azo antoka sy amim-panajana. Raha toa ka dia matory ihany ny miaraka aminy ary dia manomboka mandray azy ho zava-dehibe, ifanakalozy hevitra na izy dia liana amin’ny fananana monogamous fifandraisana. Raha izy balks, manomboka eo. Ny roa tsy mitovy ny tanjona
← Arabo Lahatsary amin'ny Chat Webcam rencontre Maghreb maimaim-poana
Fihaonana iray lehibe ny olona: dia izany amin-kitsimpo. Vato Nasondrotry Ny Fihaonana →